Paakistaan gama kibbaa keessatti baabuurrii imaltootaa walitti bu’anii yoo xiqqaatee namoonni 40 yoo du’an kanneen biro 100 caalaan mada’uu angawoonni biyyatti ibsanii jiru.
Baabuura imaltootaa lameen keessa namoota kuma tokko caalaan akka turan aangawoonni ibsanii jiru.Hojjatonni baraarsaa amma iyyu imaltoota caccabaa Baabuuraa keessatti namoota qabamanii jiran baasaa kan jiran yoo at’u lakkoofsii namoota du’anii dabaluu mala soda jedhu qabu.
Ministeerri odeeffannoo kan paakistaan Fawaad Chaudrii ibsa baasaniin akka jedhanti balaan kun rakkoo Tekniikaan, maal dhibdee ykn beekaa uumamee isa jedhu murteessuuf yeroon isaa hin geenye, kanaaf gamnii hundi qoratamaa jira jedhan.
Mummichi ministeera paakistaan Imraan Khaan balaa kun dhaqqabuu isaan Rifachuu isaanii ibsanii balaa baabuuraa hamaa dha jedhan.Waluumaa galaan qorannaan akka gaggeeffamuus gama Twiitariin ajaja dabarsan.
Waraannii Paakistaan fi milishaan iddoo balaan kun itti dhaqqabetti argamuun yaalii baraarsaa siviilon